Global Voices teny Malagasy » Londona: Mihoatra Lavitra Ireo Medaly Ny Fandresen’ny Bangladeshi · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Aogositra 2012 3:01 GMT 1	 · Mpanoratra বিজয় Nandika (en) i Bijoy, miora
Ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Lalao Olaimpika Any Londona 2012  ity lahatsoratra ity.
Baron Pierre de Coubertin, ilay mpamorona ny Lalao Olaimpika dia nilaza  fa tsy ny fandresena no zava-dehibe amin'ny Lalao Olaimpika fa ny fandraisana anjara, tahaka ny hoe tsy ny fahombiazana no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana, fa ny fikirizana. Manaraka ny teniny i Bangladesh.
Tsy afaka nandray anjara mivantana tamin'ireo fanatanjahantena atao anatin'ny hetsika ara-panatanjahantena goavana indrindra eran-tany i Bangladesh. Miaraka amin'ny fanampian'ny rafitra ‘wild card ’ [bn] dia tonga any Londona ny ekipan'i Bangladesh handray anjara amin'ny Lalao Olaimpikan-dohataona 2012. Amin'ity indray mitoraka ity dia nahazo “wild card” ho anà lalao dimy i Bangladesh – atletisma, tifitra, lomano, zimnastika ary “tir à l'arc”. Efa-taona lasa izay nandritra ny Lalao Olaimpika tany Pékin, lalao telo ihany no afaka nandraisan'i Bangladesh anjara.
Namerina namoaka lahatsoratra irao ao amin'ny Facebook mitondra ny lohateny hoe “Before opening, London Olympics bring rare honor to Bangladesh”, na “Talohan'ny fanokafana, nanome voninahitra manokana an'i Bangladesh ny Lalao Olaimpika”, i Rezaul Karim  ao amin'ny bilaoginà vondron'olona Somewherein.net. Manoratra izy [bn]:
Nisy vola vy £5 roa fahatsiarovana navoakan'ilay Britanika mpamokatra vola vy, Royal Mint. Ho an'ireo vola vy dia nalaina avy amin'izay nandresy taminà fifaninanan'ireo mpianatra haikanto sy fanaingoana manerana an'i Angletera. Saiman Miah, teratany Britanika-Bangladeshi no nandresy tamin'io fifaninanana io  tanatin'ireo fandraisana anjara an'arivony. I Saiman dia mpianatra maritrano any amin'ny Anjerimanontolon'i Birmingham. Efa novidian'ireo mpankafy manerana izao tontolo izao io vola vy fahatsiarovana ny 2012 io.
6 Jolay 2005 tamin'izay. Nihaona tany Singapore ireo Kaomity Mpikarakara ny Lalao laimpika (OCOGs) hanapahan-kevitra mikasika ny tanàna izay hampiantrano ny Lalao Olaimpika 2012. Izany ady nafotaka izany dia teo amin'i Londona sy Parisy. Isan'ireo mpikambana 11 avy ao amin'ny kaomity Olaimpika nanolotra an'i Londona ilay teratany Britanika-Bengali antsoina hoe Ayesha Qureshi .
Nampahafantatra [bn] antsika ny mombanà Bengali iray hafa ny bilaogy Sobar , izay hambabo ny lanonana fanokafana ny Lalao Olaimpika miaraka amin'ny fampisehoany dihy:
Mpanao dihy mirindra amin'ity lanonana fanokafana ny Lalao Olaimpika  ity ny teratany Britanika-Bangladeshi Akram khan. Zanakalahinà mpivady mpifindra monina avy any Bangladesh izy. Eo ambany fiadiadiany, mpandihy roa arivo sy iray alina no hampiseho ny talentany mandritra ny lanonana fanokafana ny Lalao Olaimpika.
Mandritra ny Lalao Olaimpika, hita ihany koa ny tsiron'i Bangladesh. Mitatitra ny gazety ao anaty aterineto Sylherter Alap  [bn]:
Tsy ivelan'ny kianja ihany, hahatratra ny ao an-kianja ihany koa ny dian-tànan'i Bangladesh – ary mifandray amin'ny ezak'ireo mpilalao maro. Mampahafantatra ny Bdnews  [bn] fa mandritra ity Lalao Olaimpika ity dia iray amin'ireo firenena mamokatra ny maro amin'ireo fanamiana ho an'ireo mpifaninana i Bangladesh:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/08/01/36272/
 Lalao Olaimpika Any Londona 2012: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/london-2012-olympics/
 i Rezaul Karim: http://www.somewhereinblog.net/blog/rezabd1971/29636299
 no nandresy tamin'io fifaninanana io: http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/8887278/London-2012-Olympics-Royal-Mint-to-produce-5-coins.html
 bilaogy Sobar: http://sobarblog.com/abc/10302)
 Mpanao dihy mirindra amin'ity lanonana fanokafana ny Lalao Olaimpika: http://www.cisionwire.com/kallaway/r/akram-khan-talks-about-role-in-london-2012-olympic-games-opening-ceremony,c9287788